I-Russia iphelisa izithintelo kwi-Austria, Switzerland, Finland ne-UAE
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo » I-Russia iphelisa izithintelo kwi-Austria, Switzerland, Finland ne-UAE
Airlines • isikhululo • Iindaba zaseOstriya eziziiNdaba • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zaseFinland eziQhekezayo • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Iindaba zaseSwitzerland eziQhekezayo • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
I-Russia iphelisa izithintelo kwi-Austria, Switzerland, Finland ne-UAE.
IRashiya iya kuphinda iqale inkonzo yomoya kunye namanye amazwe alithoba, kubandakanya iBahamas, i-Iran, iNetherlands, iNorway, iOman, iSlovenia, iTunisia, iThailand neSweden, ukuqala nge-9 kaNovemba.
Abasemagunyeni baseRussia bagqibe kwelokuba basuse izithintelo kwizithuthi zomoya kunye neOstriya, iSwitzerland, iFinland kunye ne-United Arab Emirates ukusuka nge-9 kaNovemba 2021.
Ukuza kuthi ga ngoku iRussia iqale inkonzo yomoya kunye namazwe angama-62.
Inkonzo yomoya neTanzania iye yanqunyanyiswa kude kube ngu-Novemba 1 ngenxa yemeko yesifo kwilizwe.
Ummeli wekomkhulu laseRussia lokuthintela i-coronavirus kwikomkhulu ubhengeze namhlanje ukuba iRussia Federation izakuphelisa izithintelo kwiinqwelomoya eziya e-Austria, Switzerland, Finland nase United Arab Emirates ukuqala nge-9 kaNovemba 2021.
Isikhululo senqwelomoya saseSheremetyevo samazwe aphesheya u-Alexander Ponomarenko Uxoxa ngesicwangciso soPhuhliso oluPhezulu kunye neBhodi
"Ukulandela iziphumo zengxoxo kwaye kuthathelwa ingqalelo imeko yesifo kumazwe athile, kuye kwagqitywa ekubeni kususwe izithintelo kuthutho lomoya kunye ne-Austria, iSwitzerland, iFinland kunye ne-United Arab Emirates ukusuka nge-9 kaNovemba, 2021," latsho igosa.
I-Russia iqale kwakhona ukugcwala komoya kunye neFinland ngasekupheleni kukaJanuwari, 2021, neSwitzerland-ngasekupheleni kuka-Agasti ka-2020, kunye ne-UAE-ekuqaleni kukaSeptemba 2021, kunye ne-Austria-phakathi kuJuni ka-2021.
Ngokukodwa, iinqwelomoya ziya kwenziwa eBahamas phakathi kweMoscow neNassau (kabini ngeveki), ukuya eIran phakathi kweMoscow neTehran (iinqwelomoya ezintathu ngeveki), naphakathi kweSochi neTehran (kanye ngeveki). Ngaphaya koko, iinqwelomoya eziya eNetherlands phakathi kweMoscow neAmsterdam (amaxesha asixhenxe ngeveki), phakathi kweMoscow ne-Eindhoven (kabini ngeveki), phakathi kweSt. Zhukovsky kunye neAmsterdam, Yekaterinburg neAmsterdam, Kaliningrad neAmsterdam, iSochi neAmsterdam (iinqwelomoya ezimbini ngeveki kwindlela nganye), ziya kuqalwa kwakhona.
Ukuya eNorway naseSweden iinqwelomoya ziya kwenziwa kabini ngeveki ukusuka eSt. Petersburg ukuya eBergen naseOslo, naseStockholm naseGoteborg. Iinqwelomoya ziya kuphinda ziqale e-Oman phakathi kweMoscow neMasqat (kabini ngeveki), eSlovenia phakathi kweMoscow neLjubljana (kathathu ngeveki), ukuya e-Monastir iinqwelomoya zaseTunisia ziya kwenziwa zisuka eMoscow (iinqwelomoya ezisixhenxe ngeveki) naseSt. (Iinqwelomoya ezimbini ngeveki), kunye neenqwelomoya ezinokubakho ezivela kwezinye izikhululo zeenqwelo moya zaseRussia, apho iinqwelo moya zamanye amazwe ziye zaqala khona (iindiza ezimbini ngeveki kwindlela nganye).
Inkonzo yomoya nge Thayilendi izakuqhubeka kwakhona kuthathelwa ingqalelo iimfuno zelizwe, oko kuthetha ukuba abemi baseRussia bagonyelwe usulelo lwenoveli coronavirus. Iinqwelomoya ziya kwenziwa zisuka eMoscow ziye eBangkok nasePhuket (kabini ngeveki), nakwizikhululo zeenqwelo moya zaseRussia, apho ziphinde zaqala khona iinqwelomoya (inqwelomoya enye ngeveki kwindlela nganye).
Ukuza kuthi ga ngoku iRussia iqale inkonzo yomoya kunye namazwe angama-62. Inkonzo yomoya neTanzania iye yanqunyanyiswa kude kube ngu-Novemba 1 ngenxa yemeko yesifo kwilizwe.